(၁၃)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ | cincds
(၁၃)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈
ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် (၁၃)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်များ အစည်း အဝေး (13th ASEAN Navy Chiefs' Meeting-13th ANCM)သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ လေကြောင်း ခရီးဖြင့် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာရာ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင် များက ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာဒီးယား နိုင်ငံ၊ ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဖြစ်သူ Mr. Tea Banh အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံခြင်း၊ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ရေတပ် ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ Admiral Tea Vinh နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ အာဆီယံ ရေတပ် ဦးစီးချုပ်များအား Bilateral Callတွေ့ဆုံခြင်းနှင့် 13th ANCM အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ ရေတပ်များအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ စစ်ရေယာဉ်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေးနှင့် သတင်း အချက်အလက် မျှဝေရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၁၃)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံ ရတေပျဦးစီးခြုပျမြား အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျခဲ့သညျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ရေ) ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့ ကမ်ဘော ဒီးယားနိုငျငံမှ ပွနျလညျရောကျရှိ
ကမ်ဘောဒီးယား နိုငျငံ၊ ဆီရမျရိမွို့တှငျ ကငျြးပ ပွုလုပျသညျ့ (၁၃)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံ ရတေပျဦးစီးခြုပျမြား အစညျး အဝေး (13th ASEAN Navy Chiefs' Meeting-13th ANCM)သို့ တကျရောကျခဲ့သညျ့ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ (ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့သို့ လကွေောငျး ခရီးဖွငျ့ ပွနျလညျ ရောကျရှိလာရာ ရနျကုနျတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ သကျပုံနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျ မြားက ရနျကုနျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
အဆိုပါ ခရီးစဉျအတှငျး ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ကမ်ဘာဒီးယား နိုငျငံ၊ ဒုတိယ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ အမြိုးသား ကာကှယျရေး ဝနျကွီးဖွဈသူ Mr. Tea Banh အား ဂါရဝပွုတှဆေုံ့ခွငျး၊ ဒုတိယ တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနှငျ့ ရတေပျ ဦးစီးခြုပျဖွဈသူ Admiral Tea Vinh နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး၊ အာဆီယံ ရတေပျ ဦးစီးခြုပျမြားအား Bilateral Callတှဆေုံ့ခွငျးနှငျ့ 13th ANCM အစညျးအဝေး တကျရောကျခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။
အစညျးအဝေးတှငျ အာဆီယံ ရတေပျမြားအကွား ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု ပိုမိုတိုးမွှငျ့ ဆောငျရှကျရေး၊ လကေ့ငျြ့ရေး ဆိုငျရာ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေး၊ စဈရယောဉျမြား အပွနျအလှနျ လညျပတျရေးနှငျ့ သတငျး အခကျြအလကျ မြှဝရေေး ဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေး ခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။